विवादमा तानिएका विद्येयकहरु कति सच्याउने ? बरु सरकार आफै सच्चिने पो हो कि ! « News24 : Premium News Channel
विवादमा तानिएका विद्येयकहरु कति सच्याउने ? बरु सरकार आफै सच्चिने पो हो कि !
टिम राम्रो नभएसम्म रिजल्ट राम्रो कुनै हालतमा आउँदैन । सरकारको टिममा गडबडी छ । विना आवश्यक र भरपुर परामर्श आएका विद्येयकहरुले कमजोर टिम वर्कको स्पष्ट उदाहरण दिइसकेका छन् ।
राष्ट्रले दुई तिहाई बहुमतको सरकार पाउनु आँफैमा एउटा सुनौलो अवसर हो । कुनै पनि देशको इतिहासमा दुई तिहाई सरकार विरलै हुन्छन् । हामीले यो कार्यक्रममा झण्डै दर्जन पटक प्रधानमन्त्रीका बारेमा भनेका छौँ, कि स्वास्थ्यका हिसाबले लगभग पुनःजीवन पाउनु भएका, सम्पत्तिका लागि सन्तान नभएका कारण कसैका लागि कमाइदिनुपर्ने बाध्यता नभएका स्वभाविक हिसाबले आफ्ना कुरामा चट्टानी अडान लिन सक्ने, संसदमा दुई तिहाई बहुमत, संविधान निर्माण भई, स्थानीय प्रदेश र संघीय सरकारको चुनाव भैसकेको यो अवस्था नेपालका लागि अवसर बाहेक केही पनि होइन ।
प्रतिपक्षको विरोधलाई सरकार स्वभाविक रुपमा लिन सक्छ । तर, आम सर्वसाधारण जनता र सरोकारवालाहरुको विरोधलाई मनै कटक्क खाने गरी जवाफ फर्काउने बानी सरकारले त्याग्नु पर्छ । विरोधलाई मुसुक्क हाँसेर स्विकार गर्दैै, विरोधका आवाजहरुलाई परिवपक्क ढंगले ग्रहण गर्दै अत्यन्त सम्मानपूर्वक जवाफ दिन बिषेश गरी सरकारका प्रवक्ता ज्यूले अभ्यास गर्नु जरुरी देखियो ।
उहाँहरुकै कुरामा आउ, टिम वर्क र होमवर्क राम्रो नभएका प्रधानमन्त्रीलाई भगवाननै माथि भएर पनि सफलता मिल्दैन । अस्ती भर्खरै गुठी विद्येयक फिर्ता भयो । कारण यो सरोकारवालाहरुसँग आवश्यक छलफल नै नभई आयो । प्राय हरेक विद्येयकमा प्रतिपक्षको मात्र होइन आम सर्वसाधारण र सरोकार वालाहरुको विरोध छ ।
यो टिम फेर्नुपर्छ भन्ने कुरा सुन्दै मुन्टो बटार्नेहरुलाई त सब भन्दा पहिला फेर्नु पर्छ । कुनै मन्त्री, प्रधानमन्त्रीको टिम मेम्बरको कारण, ती टिम मेम्बर फेल भएका कारण यो देश फेल हुन चाँहदैन ।
यो सरकार, यी मन्त्री, प्रधानमन्त्री सबै यो देशका अवसर हुन् । यो अवसर अभिषाप भयो भने आम सर्वसाधारण जनतालाई दुख हुन्छ । हरेक कदमको आलोचन र हर विद्येयकमा सामान्य भन्दा धेरै माथिको विरोध स्वभाविक होइन । गुठी विद्येयक मात्र होइन मिडिया काउन्सिल विद्येयकको विरोधमा एक पूर्व पत्रकार देशको सञ्चारमन्त्री भएका पत्रकारहरु सडकमा ओलिर्नु सामान्य कुरा होइन ।
मानव अधिकार विद्येयकमा सरोकारवालाहरुको व्यापक विरोध हुनु, शिक्षा विद्येयक, नागरिकता विद्येयक सबका–सब विरोध हुनुले सरकारको लोकप्रियतालाई घटाउँछ । सबै विद्येयकको विरोधमा गुठी विद्येयको विरोधमा मानिस उर्लिए जस्तै मानिस उर्लिएर सम्भव पनि नहोला तर, यी विद्येयकहरु सच्याउन सरकार तयार हुनु पर्ने त स्पष्ट देखियो ।
अझ समग्र्रमा भनौ यी विद्येयकहरु जो अलमोस्ट सबै विवादमा छन् । तिनलाई कहाँ–कहाँ र कत्ति सच्याउने ? बरु एक मुष्ट रुपमा सरकार नै सच्चिने हो कि ! यो बिषयमा गम्भीर छलफल गर्न को–को तयार छन्, थाहा छैन तर केही फेरबदल आवश्यक छ । व्यापक फेर बदल आवश्यक छ ।
कुनै मन्त्रीको जागिर खाइदिनु परेन, कुनै विज्ञको जागिर खाइदिनु परेन र कुनै जिम्मेवारी पाएको मानिसको जागिर घरापमा राखिदिनु परेन । तर जिम्मेवारी परिर्वतन धेरैको गर्नु आवश्यक देखियो ।
सरकारको नियतमा प्रश्न गरेको होइन, तर सरकारको क्षमता अझ भनौ सरकारलाई सघाउनेहरुको क्षमतामा त बडेमानको प्रश्न चिन्ह देखियो । राइट म्यान इन राइट प्लेसको सिद्धान्त अनुसार टिम फेरबदल हुन सके यो अवसर गुम्दैन । हाम्रा समस्याहरु ठूला छन् । तिनलाई बोलेर र भाषण गरेर मात्र समाधान गर्न सकिदैन ।
सरकार ठूलो उपलब्धी चाहन्छ । सरकारले हामी कानून मात्र बनाउँछौ–भनेको छैन । सरकारले समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली जस्तो ठुलो र महत्वकांक्षी सोच राखेको छ । ठूलो उपलब्धी हामीले गर्न सानो चित्त र साना कदमबाट सम्भव छैन । वितेको १ बर्षको अनुभवको आधारमा स्ट्राटेजी र टिम मेम्बरसँग व्यापक सुधार गर्न नसके बाँकी सयम ड्यामेज पुर्नमै खर्च हुन्छ ।
र यस्तो सल्लाह प्रधानमन्त्री ज्यूलाई हाल मौजुद टिम सदस्यहरुले दिनै सक्दैनन् । आफ्नै जागिर जाने सल्लाह कसले दिन्छ, कसैले दिदैन । उदाहरणको लागि भिजिट नेपाल इयर आउन ६ महिना र केही दिन बाँकी छ । देशमा पर्यटनमन्त्री नै छैनन्, प्रधानमन्त्रीबाट यति ठूलो मन्त्रालय, यस्तो महत्वपूर्ण समयमा सम्भव छैन ।
राज्यमन्त्रीले सबै गर्ने भए अन्य मन्त्री किन चाहियो ? कसैको जिम्मेवारी नखोसी टिममा फेरबदल गर्न सके धेरै कुरा फेरएला । नत्र मन्त्री, प्रधानमन्त्री, सरकार फेरिएर देश फेरिदैन ।